के तपाईंलाई थाहा छ, राउटरमा किन हुन्छ यूएसबी पोर्ट ? | शुभयुग
काठमाण्डौ – के तपाईंले प्रयोग गरिरहेको राउटरमा यूएसबी पोर्ट भएको विचार गर्नुभएको छ ? यदि छैन भने तपाईंले राउटरको पछाडिपट्टि यूएसबी पोर्ट देख्न सक्नुहुन्छ । वास्तवमा राउटरमा यूएसबी पोर्टको काम के होला भन्ने भन्ने लाग्नसक्छ । आज हामी राउटरमा भएको यूएसबी पोर्ट के-के काम लाग्छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्छौं ।
यहाँ उल्लेख भएका सम्पूर्ण फिचरका लागि तपाईंको राउटर उपयुक्त नहुनसक्छ । राउटर निर्माता कम्पनीले के-कस्ता फिचर समावेश गरेको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ । राउटरको डकुमेन्टमै कम्पनीले यूएसबी कुन कुन फिचर समावेश गरिएकाे छ भनेर जानकारी दिने गर्छ । प्राय बजारमा आउने वाईफाई राउटरमा उपलब्ध हुने यूएसबी पोर्टका केही प्रयोजनबारे चर्चा गरेका छौं ।
प्रिन्टिङ गर्नका लागि
कहिलेकाहीँ तपाईंलाई स्मार्टफोनमा भएका कागजात प्रिन्टरका माध्यमबाट प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ । वा कतिपय अवस्थामा तपाईंको कम्युटरमा प्रिन्टरको केबल सपोर्ट गर्ने पोर्ट नहुन सक्छ । त्यस्तो बेला हामीले राउटरमा भएको यूएसबी पोर्टको सहयोग लिन सक्छौँ ।
त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले तपाईं आफ्नो प्रिन्टरमा केबल जोडेर त्यसको अर्कोपट्टि भएको पोर्टलाई राउटरमा भएको यूएसबी पोर्टमा जोड्नुहोस् । त्यसपछि राउटर कन्फिगरेसन गएर राउटर प्रिन्टरमा कनेक्ट भएको देख्न सक्नुहुन्छ । त्यसपछि सो नेटवर्कमा जोडिएका जति पनि प्रयोगकर्ता छन्, उनीहरूले आफ्नो डिभाइसमा भएका डकुमेन्ट प्रिन्ट गर्न सक्छन् ।
स्टोरेजका लागि राउटरको यूएसबी पोर्ट प्रयोग
पेन ड्राइभमा भएका फाइलहरू नजिकै भएका डिभाइसमा पठाउनुपर्‍यो भने विशेषगरी पहिले फाइल कम्युटरमा ट्रान्फर गरेर पछि त्यस डिभाइसबाट ईमेलमार्पत अन्य पोन वा डिभाइसमा पठाउने गरिन्छ । राउटरमा भएको यूएसबी पोर्टका माध्यमबाट तपाईंले सोझै पेन ड्राइभमा भएका फाइल डिभाइसमा पठाउन सक्नुहुन्छ । यो फिचर कुनै फाइल एउटै वाईफाई नेटवर्कमा जोडिएका धेरै व्यक्तिमाझ पठाउन प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।
त्यसका लागि तपाईंले सबैभन्दा पहिले पेन ड्राइभलाई राउटरको यूएसबी पोर्टमा कनेक्ट गर्नुहोस् । त्यसपछि राउटरको कन्फिगरेसनमा गई पेन ड्राइभ सेट गर्नुहोस् । त्यसपछि सो नेटवर्कमा जोडिएका जो कोहीले सो पेन ड्राइभमा एक्सेस पाउँछन् । त्यस्तै उनीहरूले त्यहाँ भएका फाइलहरू आफ्नो डिभाइसमा ट्रान्सफर गर्न सक्छन् ।